एमसीसीको ५६ अर्बमा रोइकराई, खर्बौंको बेरुजुमा वेवास्ता – Nepal Japan
एमसीसीको ५६ अर्बमा रोइकराई, खर्बौंको बेरुजुमा वेवास्ता
नेपाल जापान २२ भाद्र १५:४६
नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमाा मित्रराष्ट्र, दातृ निकायहरुको सहयोग जति महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यति नै डरलाग्दा अवस्थाहरु पनि सिर्जना भैरहेका छन् । यस्तै डरलाग्दो अवस्था सिर्जनाको भय मडारिएको छ अमेरिका परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) । यो सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाबाट निकै ठूलो दवाव आएको खबर नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । यसका पक्षधरहरु जसरी पनि पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।
अमेरिकाले ५ वर्षका लागि भनेर ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको छ र यो रकम खासै ठूलो हैन, तर यो रकमभन्दा पनि यसमा भएका सम्झौता ठूलो छ र नेपाललाई अमेरिकाको मुठ्ठीमा कस्ने छ । एमसीसीका समर्थकहरु यो परियोनापछि नेपालको विकासमा फड्को मार्ने बताइरहेका छन् ।
तर, उनीहरुले के बुझेनन् भने ५६ अर्ब हाराहारीको रकमले ५ वर्षमा के हुन्छ ? देश विकासका लागि रकमकै अभाव हो भने खर्बौं रुपैयाँको बेरुजु उठाउन किन सकेनन् ? ५० औं अर्ब रुपैयाँको करछलीमा किन आँखा चिम्लन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर आम जनताले खोजिरहेका छन् ।
यी शर्तहरुका आधारमा एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइनले ओगटेका जमिनमा उसैको अधिकार हुने भो र त्यहाँ उसले जे चाह्यो त्यही गर्न पाउने भयो । त्यस्तै कर छुट, आयोजनामा भारतको समर्थन लगायतका प्रावधानहरु नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको स्पष्टै हुन्छ । यो सम्झौतापछि नेपालको अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अमेरिका प्रवेश गरेपछि जस्तो भएको छ त्यस्तै हुन्छ ।
दवाब कति ठूलो छ भने सरकारले एमसीसीको नाम नलिई मित्रराष्ट्रहरुले नेपाललाई गर्ने सहयोगका बिरुद्धमा बिरोध प्रदर्शन नगर्न चेतावनी नै दियो । एमसीसी कार्यान्वन नभए देश विकास नै नहुने गरी प्रचार गर्नेहरुले सम्झौताका बुँदाबुँदा पढेका छन् कि छैनन् ?